IHuawei iza kusebenzisa iiphaneli ze-Samsung AMOLED kwiHuawei P30 | I-Androidsis
Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi iya kuba lusuku apho siza kwazi isiphelo esiphezulu seHuawei, IHuawei P30. Umnyhadala wentetho ofana nalowo sasinonyaka ophelileyo. Olu luhlu lutsha lophawu lwesiTshayina luthembisa ukuba luza kuba ngumgangatho obalulekileyo, ngokujolisa ngokukodwa kwiikhamera zesixhobo, apho inkampani izokwazisa khona inkqubela phambili.
Kwezi veki bekukho ezinye ukuvuza kwinkcazo yezi modeli, esele sikuxelele ngayo. Uyilo lukwangundoqo kwezi Huawei P30s. Ingakumbi iphaneli eza kusetyenziswa ziifowuni. Ngesi sizathu, uphawu lwentengiso luzinikele kwelona nqanaba liphezulu malunga noku.
Kwixesha elidlulileyo, uphawu belusebenzisa iipaneli ezenziwe ziinkampani ezinje nge-LG kwiifowuni zayo. Nangona kwesi siphelo siphezulu sizibophelele kumgangatho ophezulu. Ngesi sizathu, inkampani igqibe ekubeni ibenayo Isamsung kwimveliso yephaneli yesixhobo. Ke iya kusebenzisa iphaneli ye-AMOLED ukusuka kuhlobo.
Iiphaneli ze-AMOLED zeSamsung zezona zilungileyo esizifumana kwii-smartphones ze-Android namhlanje. Ngesi sizathu, uphawu lwesiTshayina lufuna ukuzisebenzisa kwiHuawei P30 kunye neP30 Pro.Owona mgangatho uphezulu kule ndlela, ulunge ngakumbi kumava omsebenzisi ngalo lonke ixesha. Ngokukodwa xa ujonge umxholo, ukongeza ekusebenziseni amandla okumodareyitha.
Nangona kunjalo, gcinani engqondweni ukuba ezi panels zexabiso azibizi. Ke ngoko, kunokwenzeka ukuba Masibone ukuba ixabiso lezi Huawei P30 liya kuba phezulu esiyibone kwii-smartphones kunyaka ophelileyo. Ukucaciswa ngokubanzi okufanelekileyo kubo kulindelwe, kunye nale ndawo iphambili.
Ngethamsanqa, akufuneki silinde ixesha elide de sive. Kuba ngoMatshi 26 le ntetho ibanjelwe eParis igosa lezi Huawei P30. Isiphelo esiphakamileyo apho uphawu lwaseTshayina lufuna ukugcina le ndlela ikhulayo kwintengiso yayo, kunye nokonyuka okukhethekileyo kwinqanaba layo eliphezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » IHuawei P30 iya kuba nezikrini ze-Samsung AMOLED